Fiarahamonina, Politika, Media | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Fikambanana, politika, media
Inona no dikan'ny hoe menatra?! Ahoana no ifandraisany amin'ilay fotokevitra - ny handoroana? Iza no afaka mandoro?! Ho may?! Latsaka anaty henatra?!
Inona no dikan'ny hoe menatra?! Ahoana no ifandraisany amin'ilay fotokevitra - ny mihira? Iza no mahay mihira?! Hihira?! Latsaka anaty henatra?! Mihirà ary mianjera amin'ny fahafaham-baraka - hevitra roa samy hafa tanteraka! Singe, ...
Inona ny fifanekena momba an'i Tilsit?
inona ireo Fifanarahana Tilsit? Ny fifanarahana Tilsit tamin'ny 1807 dia nifarana teo amin'i Russia sy France taorian'ny fifampiraharahana manokana tany Tilsit teo amin'ny amperoran'i Russia Alexander 1 sy France, Napoleon. Ny fandresen'i Napoleon tamin'ny ...
Taiza no niseho voalohany ny famantarana, ary inona no dikan'izany? sary
taiza no nisehoan'io famantarana io, ary inona no dikan'izany? sary Misy kinova maromaro momba ny niandohan'ity famantarana ity. V-sign! Fandresena! Famantarana fandresena! Ny anglisy no fantatra voalohany nampiasa izany fihetsika izany izay midika fandresena. ...
Ary i Ko dia mahafantatra ny fahombiazan'ny turbine
Ary iza no mahalala ny fahombiazan'ny turbine etona, ny fahombiazan'ny motera etona dia 812%, turbine etona na gazy dia 2040%, motera fandorana anatiny dia 2025% (ho an'ny motera carburetor) ary 3036% (ho an'ny motera diesel). Ny fatiantoka lehibe amin'ny motera voalohany ...
Inona no atao hoe Gulag?
Inona no atao hoe Gulag Aleo tsy fantatra. Amin'ny ankapobeny, ny Fitantanan-draharahan'ny toby. Ity dia fikambanana iray nifampiraharaha tamin'ny sesitany, amin'ny hevitry ny olona, ​​nanao sesitany ny GULAG (Direktoraten'ny toby fiasan-kery, tobin'ny asa ary toerana fitànana) ...
Oviana no maty i Shakespeare?
oviana i Shakespeare no maty? Tamin'ny 1612, tamin'ny 23 aprily, nodimandry i Shakespeare. Tamin'ny volana martsa 1616 dia namorona didim-pananana i Shakespeare. Maty tamin'ny 23 aprily 1616 i Shakespeare ary nalevina tao amin'ny fiangonana paroasy, toerana misy ny fasany ...
Inona ny atao hoe "graffiti", avy aiza ny teny vahiny?
Inona ny atao hoe "graffiti", avy aiza ny teny vahiny? Graffiti (graffiti italianina, avy amin'ny teny grika hanoratra) soratra na sary amin'ny rindrin'ny tranobe sy ny lalana, ny fiaran-dalamby, ary koa ny fefy ary ny hafa mitsangana ...
FAHARETANA momba ny fianjeran'ny fanjakana tandrefana romanina ???
Antony nahatonga ny fianjeran'ny Fanjakana Romanina Andrefana ??? 1. Goavana dia lehibe izy io (hatrany Ekosy ka hatrany Persia, hatrany Espana ka hatrany Hongria), tsy azo natao ny nifehy ny sisin-tany rehetra, na teo aza ny làlana tena tsara, ...
Inona no asa nataon'i Leonardo da Vinci ao amin'ny Hermitage?
Inona ny asan'i Leonardo da Vinci tazomina ao amin'ny Hermesy? Sary hosodoko nataon'i Leonardo da Vinci ao amin'ny Hermitage - Madonna Benoit sy Madonna Litta. Ao amin'ny efitrano faha-214 an'ny Hermitage, sary hosodoko kely roa no aseho. Asa ireo ...
Inona no renivohitry ny tsanganana?
inona ny kapitalin'ny tsanganana? ambony Ny tampon'ny tsanganana. Ny tampon'ny tsanganana. Amin'ny endriny, misy Ionic, Doric ary ny hafa, tsy tadidiko tsara 🙂 Ahoana no nilentiky ny masoandro, hafahafa i Wikipedia ...
Ahoana no anaovanao teny na asa?
ahoana ny fomba fanoratana ny teny hoe miasa na miasa? misy famantarana malefaka. Fa afaka manoratra mafy ianao) borosio amin'ny fiteny rosiana amin'ny alàlan'ny boky fampianarana ho an'ny kilasy faha-3. miasa ianao, mazava ho azy.))) ianao miasa Tyts, avia! Miasa ianao. Maty…
inona no finoana abkaziana?
tsy mitovy ny finoana ananan'ny Abkhaz, misy Kristiana ao aminy. Abkhazia dia heverina ho firenena silamo, na izany aza, moske iray miasa ihany no misy eto, na dia eo aza ny fisian'ireo fitoerana masina mpanompo sampy miisa 5, ary fiangonana ortodoksa ...
Inona no dikan'ny hoe asimilate?
Inona no dikan'ny hoe assimilate? Midika izany fa i Ksyunya Zveryugina no mangatsiatsiaka indrindra ary tsy azo tohaina indrindra. Ny fivadiham-pinoana rehetra maloto ati-doha - mba hahazoana sokay. Arotsaho amin'ny olon-kafa ny dobo fototarazonao. ATP Tongava tahaka, manambatra. Ohatra, assimilate ...
Ny ampondra sy ny soavaly = mule, soavaly ary boriky =? Nahoana ary inona no fahasamihafana?
Ampondra sy soavaly = ampondra, soavaly ary ampondra =? Fa maninona ary inona no mahasamihafa azy? Sarotra amin'ny fiarahamonin'olombelona (Raha misy soavaly sy boriky manapa-kevitra ny hiteraka, ny vokatry ny fiezahana ...
Inona no fivoriambe?
Inona ilay Convention? amin'ny ankapobeny, ity fotokevitra ity dia mifandraika amin'ny fizika, miaraka amin'ny famindrana hafanana. Midika angamba aho fa ny Fifanarahana UN momba ny zon'ny zaza. Soraty amin'ny lohahevitra sy karoka GOOGLE. Sarety fampahalalana sy bebe kokoa ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,996.